DEZIE NJEHIE 0XC0000005 NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Windows sistemụ arụmọrụ, nke bụ ngwanrọ siri ike, nwere ike ịrụ ọrụ na njehie maka ọtụtụ ihe. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi edozi nsogbu ahụ na koodu 0xc0000005 mgbe ị na-agba ọsọ.
Ighazi njehie 0xc0000005
Usoro a, nke gosiputara na igbe nzahie, na-agwa anyị banyere nsogbu na ngwa ya ma ọ bụ banyere ọnụnọ na usoro nke na-egbochi ọrụ nkịtị nke mmemme nkwalite niile. A na-edozi nsogbu na mmemme onye ọ bụla site na iwegharị ha. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwanrọ hacked, mgbe ahụ, a ghaghị ahapụ ya.
More: Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme na Windows 7
Ọ bụrụ na ntinyeghachi ahụ enyereghị aka, gaa n'ihu na ụzọ ndị a kọwara n'okpuru. Anyị na-eche ọrụ nke iwepụ nsogbu nhụghachị ahụ, ma ọ bụrụ na arụpụtaghị ya, weghachite faịlụ faịlụ.
Meghee "Ogwe njikwa" wee pịa njikọ ahụ "Mmemme na Ngwa".
Anyị na-aga na mpaghara "Lelee mmelite arụnyere".
Anyị chọrọ mmelite dị na ngọngọ ahụ "Microsoft Windows". N'okpuru ebe a, anyị na-enye ndepụta nke ndị na-edozi "nchụpụ".
Chọta mmelite mbụ, pịa ya, pịa RMB ma họrọ "Hichapụ". Biko mara na mgbe wepụchara ihe ọ bụla, ị ga-amalitegharịa kọmputa ma chọpụta ọrụ nke ngwa ahụ.
Nzọụkwụ 2: Iwu Iwu
Usoro a ga - enyere aka na ikpe ebe, n'ihi ọdịda, ọ gaghị ekwe omume ịmalite ọ bụghị naanị mmemme, mana ngwaọrụ ngwaọrụ - Ogwe njikwa ma ọ bụ ngwa ngwa. Iji rụọ ọrụ, anyị chọrọ diski ma ọ bụ windo mbanye na nkesa nwụnye Windows 7.
Gụkwuo: Ntuziaka ntinye site na nzọụkwụ Windows 7 site na windo mbanye
Mgbe installer nbudatara faịlụ niile dị mkpa ma gosipụta windo mmalite, pịa igodo ọnụ SHIFT + F10 iji malite njikwa.
Chọpụta nkewa nke diski diski bụ usoro, ya bụ, o nwere nchekwa "Windows". Nke a na-eme site na otu
Ebee "e:" - nke a bụ akwụkwọ ozi a chọrọ. Ọ bụrụ na nchekwa ahụ "Windows" ọ na-efu, anyị na-agbalịa iji akwụkwọ ozi ndị ọzọ rụọ ọrụ.
Ugbu a anyị na-enweta ndepụta nke mmelite arụnyere site na iwu ahụ
mbupu / oyiyi: e: / get-packages
Cheta, kama "e:" Ịkwesịrị ịdebanye aha akwụkwọ ozi gị. Ntuziaka DISM ga-enye anyị "mpempe akwụkwọ" ogologo nke aha na njedebe nke nchịkọta nkwalite.
Ịchọta mmelite ahụ achọrọ iji aka ga-abụ mfịna, yabụ anyị na-ebido akwụkwọ ozi ahụ
Jide LMB ma họrọ mpaghara niile malite na "Ndepụta ngwugwu" ruo "Ọrụ arụchara nke ọma". Buru n'uche na ọ bụ naanị ihe dị n'akụkụ ọcha ahụ ka edere. Lezienu anya: anyi choro ihe omuma nile. A na-emechi ya site na ịpị RMB na ebe ọ bụla "Iwu iwu". Achọrọ itinye data niile n'ime akwụkwọ edetu.
Na ntinye ederede, pịa igodo nchikota Ctrl + F, tinye koodu melite (depụta n'elu) wee pịa "Chọta ọzọ".
Mechie windo "Chọta"họrọ aha niile nke ngwungwu ahụ achọtara ma detuo ya na clipboard.
Gaa "Iwu Iwu" dee otu ìgwè
iwe / oyiyi: e: / wepụ-ngwugwu
Ọzọ anyị gbakwunye "/" ma kpocha aha ahụ site na ịpị bọtịnụ òké aka. Ọ ga-agbapụta dị ka nke a:
iwe / oyiyi: e: / wepu-package /PackageName:Package_for_KB2859537~31bf8906ad456e35~x86~~6.1.1.3
N'ọnọdụ gị, data ndị ọzọ (nọmba) nwere ike ịdị iche, ya mere dee ya naanị na akwụkwọ ndetu gị. Isi ihe ọzọ: a ga-edekọta otu egwuregwu ahụ n'otu akara.
N'otu ụzọ ahụ, anyị na-ehichapụ mmelite niile site na listi ndepụta ma degharịa PC.
Usoro 3: Weghachi faịlụ faịlụ
Ihe nke usoro a bụ imezu ndụmọdụ njikwa iji chọpụta na iguzosi ike n'ezi ihe na weghachite faịlụ dị iche iche na nchekwa usoro. Ka ihe niile wee rụọ ọrụ dị ka anyị chọrọ "Iwu Iwu" ga-agba ọsọ dị ka onye nlekọta. Emere nke a dika nka:
Mepee menu "Malite"wee mepee ndepụta ahụ "Mmemme niile" ma gaa na nchekwa "Ụdị".
Pịa bọtịnụ òké aka "Iwu iwu" ma họrọ ihe kwekọrọ na ihe di n'ime.
Iwu ka e gbuo ya:
mbipụta / online / cleanup-image / restorehealth
Mgbe njedebe nke ọrụ niile malitegharịa kọmputa ahụ.
Biko mara na a ghaghị iji nlezianya eji usoro a mee ihe ma ọ bụrụ na Windows gị abụghị ikikere (wuru), nakwa ma ọ bụrụ na ị mejupụtara isiokwu ndị chọrọ ngbanwe nke faịlụ usoro.
Idozi njehie 0xc0000005 siri ezigbo ike, karịsịa mgbe ị na-eji Windows mebiri emebi na mmemme hacked. Ọ bụrụ na nkwenye ndị a ewetaghị nsonaazụ, mgbe ahụ gbanwee nkesa nke Windows ma gbanwee software ahụ "gbawara agbawa" na otu nnwere onwe free.